सम्वृद्धि र उपभोग | सिमान्तMarginal सम्वृद्धि र उपभोग – सिमान्तMarginal
Posted on9May 2019 21 Jul 2019 by Jesi for INCOMESCO
नेपालका सबै जसो राजनैतिक दलहरुले सम्वृद्धि शब्दलाई पेवा झैं प्रयोग गरेको अवस्था छ । तर असंव्रिद्ध अवस्थाहरुको संव्रिद्धी भयो कि भएन भनेर खोज्यो भने संव्रिद्धी त टुसाएको पनि देख्न सकिन्न । यसै क्रममा जनताको जिवनस्तरलाइ परिवर्तन भएको देखाउने कुराहरुलाई हेर्‍यो भने प्रष्ट देख्न सकिन्छ । जस्तै झिङा, कुकुरको साथमा बेचिने मासु पसल; मान्छे कोच्ने, मार्ने वा मान्छेलाई गाली गर्ने जे भने नि मिल्ने सार्वजनिक यातायात; गाडीहरुको घुइंचोमा दिनप्रतिदिन सुक्दै गएको ट्राफिक प्रहरी; सडकको छेउमा अस्तब्यस्त पारेर बेचिने तरकारी; रातमा उठेर भर्नुपर्ने बाल्टी र पानी; असारमा रोपाइं गर्न मिल्ने भाताभुङ शहरका सडकहरु ! अनि झिंगा भन्केका चमेना गृह र थोत्रा ढड्डा माकुराको जालोले ढाकिएका मालपोत कार्यालय- कसले भन्छ नेपालमा संव्रिद्धी आयो भनेर ?
वालुवाटार नै बिक्री हुँदापनी प्रधानमन्त्रिहरु थाहा पाउँदैनन । अठार-अठार घण्टा मुलुकलाई अन्धकारमा राखिएको कारण पनि नेपालका प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले पत्तो पाउँदैनन । यिनै विकृतिका आमने सामने रहेर नेपालमा गरिवी घटेको तथ्यांकहरु पढनु पर्दाको पिडा झन कठिन हुन्छ । गरिवी घटाऊन ठुलो योगदान गरेको एकमात्र बैदेशिक रोजगार माथि दलाल र सरकारी कर्मचारीबाट हुने गरेको शोषण ले त पराकाष्टा नै नाघिसकेको छ, त्यसमा पनि सुधार छैन । यता आफ्नो क्याम्पसको भाताभुङ डुंगडुङ गन्हाउने शौचालय भएको स्व बि यू सभापति रत्नपार्कमा चोर औंला ठड्याउँदै देशमा संव्रिद्धी ल्याउने भाषण गर्न पनि छाडेका छैनन ।
सडक चौडा र घर अग्लो पार्दैमा सम्वृद्धि आउँदैन । जनताको उपभोग गर्न सक्ने क्षमतामा पनि बिस्तार भएको हुनुपर्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका बिषयहरुमाथि एक टकले घोरियो भने निरासा बाहेक केही हात लाग्ने अवस्था छैन । एकाध ठाउंमा रङिन परिवर्तन भएको देखाउन सकिन्छ तर त्यी सबै अल्पकालिन र आस्थाइ मात्र हुन । वस्तवमा परिवर्तन र बिकासअको अनुभुति जनजिविकासँग अभिन्न रहेका उल्लेखित बिषयहरुबाट गराएको हुनुपर्छ । सडक चौडा र घर अग्ले पार्दैमा संव्रिद्धी आउँदैन । जनतालेको उपभोग गर्न सक्ने क्षमतामा पनि बिस्तार भएको हुनुपर्छ ।
प्रतिपक्ष हराएको सूचना 16 Dec 2018
नेपालमा असफल पात्र र प्रवृत्ति7Nov 2018
Previous Postसम्वृद्धि : मासु पसलको अवस्थाNext Postसम्वृद्धि: ब्यक्तिगत क्षमताको बिस्तार
One thought on “सम्वृद्धि र उपभोग”
Pingback: सम्वृद्धि: व्यक्तिमा क्षमताको बिस्तार | सिमान्तMarginal